Chii chinonzi Linux koni? | Linux Vakapindwa muropa
Unogona kushandisa anoshamisa Live Live CD, ona akanakisa maficha munyika ye operating systems game CompizFusion, iwe wakanakidzwa kuziva izvozvo muLinux hamuna mavhairasi uye iwe wakawana inonakidza nyika ye free software. Kusvikira…
… Vakakuudza nezve koni.
Ini ndoda kuisa printer, unogona kundibatsira?
Ehe, enda pane iyo console.
Uye yangu Playstation inei nazvo?
Idiot, shandisa iyo Linux koni, iyo yekushandisa system iyo ini ndichangobva kuisa, iyo yawakandibvunza nekuti haina hutachiona uye ine cube inopota.
Ah ko izvo?
Iyo ndiyo Linux koni.
Zvakashata kwazvo! Inoita kunge Windows DOS
Tarisa zvakanaka: unofanirwa kumhanyisa dpkg -i driver.deb wobva waumbiridza iyi… blah blah blah
Chii nzara! Uye iwe unogara uchifanira kutendeukira kune izvi kugadzirisa chimwe chinhu muLinux?
Uchazojaira, ndiyo yakanakisa iripo, ndinoishandisa uye ndiri mushandisi anofara.
Nooooo, ndokumbira ubvise tsvina iyi pandiri, ibvise uye undipe XP. Ndapota!
Isu isu vashandisi veLinux tinoti yedu yekushandisa system yakachinja kuti ive nyore kushandisa, zvisinei, inhema yekutaura kuti iyo console haina basa. Ehe, kune vanhu vanoti:
Ini handina kushandisa iyo Linux koni kwenguva yakareba, nooo hazvichadiwe, chinhu chekare
Nhema, zvakakosha kuti uzive mashandisiro ekunyaradza iyo matambudziko anogona kuitika kwauri muLinux kunyangwe uchishandisa akanyanya "girlish" distros anogona kuwanikwa. Y pamwe ndizvo zvinoparadzanisa Linux nevanhu vazhinji kana kwete?
1 Chii chinonzi Linux koni?
2 Inofanira kunyangarika here?
Chii chinonzi Linux koni?
Kana iwe ukaturikwa uye hazvisati zvava pachena kwauri chii chinonzi Linux koni, Ini ndichaitsanangura muchidimbu:
¿Unoyeuka here MS-DOS? Screen nhema manje inonzi CMD mu XP? Kana iwe usati wambozviona, ini handikupi mhosva, ndezvekuti muWindows mune zvese chishandiso chisina basa. MuLinux iwe unowana "nhema dema" yakafanana chaizvo neiyo, asi zvakanyanya kubatsira. Vashandisi veLinux vanofanirwa kuishandisa nguva nenguva, kumisikidza zvinhu, kufambisa mafaera, kushandura mvumo yefaira, kugadzirisa zvimwe zvehurongwa zvichienderana nedistro senge internet yekubatanidza kana madhiraivha emakadhi evhidhiyo.
MuLinux, kwete chete manejimendi maneja anofanirwa kuziva mashandisiro ekushandisa koni, vashandisi vekupedzisira zvakare vanofanira kuziva nzira yekunzwisisa uye kuita kuti ishande zvishoma, kunyanya kana vakashandisa Linux kumba uye vasina wekuvabatsira. Ngatitii zvakafanana nekutyaira mota, kana iwe ukaitenga, unofanirwa kuziva mamwe makanika.
Kana iwe uchida kudzidza maitiro ekushandisa iyo Linux koni, ini ndinokurudzira izvi zvinongedzo:
Linux Console Dzidziso - Yese Linux
Iwo ekutanga Linux mirairo - Ubuntu Mudzi
Inofanira kunyangarika here?
Kumwe kwekushoropodzwa kukuru kweLinux kunoenderana nekuti zvakaoma, mune mamwe mazwi, kuti Linux haisi se "inoshandiswa" seWindows kana Mac uye ini handina kukwanisa kutaura kuti vari kukanganisa. Radical linuxers mhinduro ndeiyi: Linux hazvisi zvehusimbe kana Linux kwete zvevanhu vese.
Izvo zvinodikanwa here kuti mushandisi achinjike kune iyo system kana inofanirwa kuve iyo system inoenderana nemushandisi?
Linux ndeyevamwe chete here kana ndeyavanhu vazhinji?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Iyo Linux Console - Nhema Screen YeRufu?
Ichokwadi kuti havazi vese vano "chinja" kune iyo koni, asi hazvisi zvakaoma kunzwisisa kana. Izvo hazvina musoro kuzvibata iwe, kune chete kune akati wandei (akati wandei) emirairo iwe aunofanira kubata nemusoro (kana kuenda kugoogle kunozorodza ndangariro yako).
Zvakare kubva pane zvakaitika kwandiri ndinoziva kuti kana ukangosangana neBASH, haumushandure KUNE CHINHU. Ini pachangu handingambo shandure hurefu hwezvinhu zvandinogona kuita kubva kunyaradzo, nekuda kwekuregeredzwa (uye kunyangwe kunzwisa tsitsi) kubata kwe command.com kana cmd.exe.
Ndisati ndashandisa yangu Debian, ndaiziva kuti neWindows paive nemipimo, kunyangwe ini ndaisambofunga kuti kune VAKAWANDA. Sezvo ini ndichishanda pamwe neUNIX (uye ini ndinoti UNIX nekuti ini ndinoshanda paGNU / Linux, AIX, BSD, nezvimwe.) Zuva rega rega rinopfuura ndinoona kuti pane ZVAKANAKA ZVAKASIYANA …… uye izvo hazvisi kungofarirwa neanogadzira, kana dhizaini, kana geek ... kana asiri munhu wese munhu.
[quote] Vanhu vanoramba kushandisa sisitimu inoratidza kuti iri nani kupfuura windows nekuda kwekuti koni inovatyisidzira, havafanirwe kushandisa linux. [/ quote]
Pamwe linux haikodzeri kushandiswa nemunhu wese nekuti hazvisi nyore se windows.
Makore apfuura ini ndanga ndichiverenga yakanakisa muunganidzwa wesainzi ngano nyaya, uye imwe yenyaya yakataura chaizvo izvo kuti: Wakajaira here chako chidiki chidimbu cheetekinoroji, kana chidimbu chako chinotonga iwe?
Vanhu vanoramba kushandisa sisitimu inoratidzirwa iri nani kwazvo kupfuura windows (iyo yakapusa distros, yekushandisa, yakaoma, uye yakavimbika) nekuda kwekuti iyo koni inovatyisidzira, havafanirwe kushandisa linux. Rega ivo varambe vachibhadhara sezvinoita mapenzi nguva dzese hutachiona paunouraya mashandiro avo uye mafoto ezororo. Kuti ivo vanoramba vachibira, rinova iro basa rinodhura zvakanyanya kupfuura kuziva mashandisiro eiyo terminal "zvishoma" uye nekuda kwangu.
Iyo console chinhu chinogara linux mushandisi kubva zuva nezuva. Kune ma distros anopa graphical maficha, asi haina kufanana (Synaptic kesi uye apt-tora kana mandriva nevabatsiri vayo mazana maviri).
Uchishandisa terminal, kupa mvumo, sekureva kunoita masosi, chinhu chakasarudzika, kana kungo gadzira iyo Wi-Fi ...
Zvino, kuti vanhu vanozvitya, saka, ini ndinofarira vashanu% yevashandisi kune linux ine 5% uye zvese izvo "zvinogadzira linux" iri windowserized standard yemapenzi.
Izvo zvakafanana zvakanyanya ... asi ichokwadi.
Zvino ini ndinobvunza iwo mubvunzo: Zvakanaka here kuti tekinoroji iswedere padyo nemushandisi, kana zviri nani kuti mushandisi azive chimwe chinhu nezve izvo zvinoita kuti zvinhu zvishande?
Iyo inonyaradza shamwari yevavengi vashoma yevakawanda xD
Ini ndinoshandisa Ubuntu asi iwe unofanirwa kutendeseka dzimwe nguva zvakafanira kupinda muoni: P
Rega ndikutaurire chimwe chinhu chako chinotaridzika senge kubva kuma60s xD, haugone kuratidza imwe futuristic koni senge yangu
Yangu Chrome-maitiro koni
PS: Ndiwo musoro weUbuntu unonzi Chrome-Senge, muBlog rangu pane chinongedzo chekurodha pasi uye ndinotsanangura kuti ungaiisa sei: P
Ngatirambei tichiwacha mbatya nemaoko uye tichiita moto wekudziisa mvura kuti tirege kuita nungo. Ivo vanoda kupedza zuva rese vachigadzira kumhanyisa purinda, zviri kune mumwe nemumwe wangu zvandinoda ndeyekuti tekinoroji iite kuti hupenyu hwangu huve nyore. Mukuhwina pane zvakabhadharwa uye zvemahara zvakapfava zvese zvakanaka nezvakaipa, chakanakira Linux ndechekuti iwe unogona kuita chero chaunoda, Ubuntu inoedza kuita mushandisi anoshandisa PC sechishandiso kwete sechinhu chekutandarira. Nenzvimbo yakawandisa vanofanirwa kugadzira linux yakabatana umo zvese zvinogona kuitirwa uye zviri zvevose, vese kune avo vanofarira kunyora mune iyo koni uye avo vane mukana wekuve nekombuta ine zviwanikwa uye vasingade iyo koni, kwandiri ndingangoda zvakanyanya zvingasarudzwa pane zvese, pane mabhirioni gumi distros akatenderedza, imwe neimwe inoshandura nzvimbo yayo icon uye kuidana zita, yega yega ine chimwe chinhu chakanaka asi ini handikwanise kushandisa hupenyu hwangu ndichiisa nekubvisa kugovera.
Kutumidza zita re disk drive kupusa here?
Windows ine rakadzvanywa control panel yemushandisi mutsva?
….Oh Mwari wangu…..
Ndinoyedza uye tinokakavara. Kutenda nacho nekumira.
Pamwe havazi vese vanokodzera kugona kunakidzwa neLinux kana vasina kutsunga kudzidza zvishoma.
Kupusa uye kusaziva kutaura kuti Windows iri nyore kupfuura Ubuntu GNU / Linux, nekuti Ubuntu inoita kushandisa Linux ka1000 zvakapusa kumushandisi wekupedzisira pane Windows; Windows ine rakadzvanywa control panel yemushandisi nyowani, pachinzvimbo Ubuntu haina, zvese zvinoitwa kubva kuSystem menyu, Windows inonyora mayuniti netsamba, farce yakazara, A. C:, D:… nezvimwe blah, pachinzvimbo kana ukashandisa DVD mu ubuntu inozviratidza pa desktop uye unoisa zita reDVD uye kwete tsamba yekufungidzira. MuUbuntu kumisikidza network mumaoko emushandisi wekupedzisira zviri nyore nhanho mbiri kana nhatu, pachinzvimbo ita kuti mushandisi anzwisise kuti anovhura control panel> network> kurudyi tinya TCP / IP…. Blah blah blah blah ……
Siya kusaziva usaenzanise mashandiro epasi nemitemo yenyika uye kufunga kweVanhu «GNU / Linux», nemarara emusika wavanouita sezvavanoda «Windos» !!!!!!!!! !!! !!!
Pindura ku jeickelement
Zvakanaka, kwandiri, koni yacho ndiyo yakanakisa, ndiyo musimboti weLinux, ndingati ndiyo musimboti wesoftware yemahara uye yakavhurwa sosi, iine sarudzo yekuisa iwo chaiwo matumbo eOS yako kuishandura uye kuigadzirisa. kune zvaunofarira. Hazvisi nyore pakutanga, asi sezvo munhu wese paanowanzojaira uye kana munhu achinge anyatisa koni yacho, iri nani kwazvo kupfuura chero graphical interface, iyo mc inoshamisa
Ini ndichangopera 26546565 kuyedza… .ok 3… asi zvakatora nguva yakareba kuti zvibudirire, Ok?. Asi hei, chokwadi ndechekuti ini ndaitotadza kuisa Knoppix ... ndakachiisa pasi kwechinguva uye chokwadi chandisinganzwisisi asi hapana, chinofanirwa kunge chiine maeeeeeees ezvakanakira kugona kugadzirisa chero chaunoda uye ona kuti yakaputsika, asi chokwadi ndechekuti zvinotora nguva kuti uidzidze, uye zvimwe kana iwe uchinge wajaira OS senge graphical seWindows, handifungi chaizvo kuti imwe iri nani kupfuura imwe chete kune vanhu vakasiyana, mainini, ambuya vangu naamai vangu vakakosha kana iri yakavhurwa sosi kana kwete, ivo vanongoda chete kuona mafoto ezororo uye kutaura kuburikidza ne "mesinyer", asi kana chiri chokwadi kuti kune vanhu vanoshandisa komputa zvinopfuura kuti, kunyangwe isiri padanho repamberi, zvingave zvinokurudzirwa uye zvakawanda kudzidza kushandisa Linux kukanganwa kamwechete nezvehutachiona, bhuruu masikirini maminetsi mashanu uye nezvimwe ... Asi ndinotenda kuti chiitiko chinotora time uye hapafanire kuve nekuenzanisa kwakanyanya pakati peaya maOS
Esty, ini ndichakuudza nenzira iri nyore.
Kuisa chirongwa mumawindo kunoreva kurodha pasi, kuriongorora kuitira mavhairusi, kutarisa zvinodiwa, kurimisa, uye kwauri, kuripwanya.
Mu linux iri "sudo apt-tora kuisa chirongwa", iyo inorodha pasi, inogadziridza nekuiisa mune imwechete kuraira.
Ah mwari wangu ... Kunyangwe kana mushandisi akagumbuka, icha "wedzera nekubvisa zvirongwa", iri mune graphical mode ...
Chinhu pamusoro pemashoko, kana icho kana chinouya kwandiri, chokwadi ndechekuti kune avo vanobva kumahwindo iyo linux faira system inoshamisa. Uye iyo control panel ... pasina kupokana, Ubuntu iri nyore kwazvo ...
Kune iwe yekugadzira inonakidza blog ... ^
Paunenge usina internet kuti uone kana zviri nyore. Tinotaura zvatinoda.
Esty ... usazvidya moyo:
MUNHU WESE ANOSHANDISA ZVAVANODA (kunyangwe Win, wadii kudaro), asi kana uine matambudziko (ndinoziva kuti kuhwina kwako hakuna), fonera Redmond uye ubvunze iyo nhamba yefoni yebasa repamutemo reMicrosoft LICENSED PRODUCT yako, yakabhadharwa. kubva pakutenda kwakanaka, ndisingakwanise KUZVIMBISA KWAKO kunyange pakombuta imwe chete, kutenga A NEW LICENSE yePC imwe neimwe yePC neiyo imwechete Inoshanda Sisitimu uye inomhanya ZVESE asi ZVESE zveZVO ZVAKAITWA uye zvakabhadharwa-zvakanaka zvikumbiro, zvakanaka?
Nezve zvavanofarira, mavara.
Console zvinhu dzimwe nguva zviri nyore, inyaya yekudzidza mirairo ... izvi zvinoshanda kune zvese ...
asi ini ndichiri kuona zviri nyore kuisa mapurogiramu kubva pahwindo ... ine mandriva kana ubuntu, ayo ari iwo andinoziva uye anoita kunge akanaka kwazvo kwandiri. kunyanya kune izvo zvekuvimbika, izvo zvinonetsa hupenyu hwomunhu kubva kunyaradzo ... kana zvirinani zvinoita senge kwandiri, hehe
tsime, kutsamira kunotorwa pasi otomatiki mu ubuntu, uye neakakodzera iwo anotorwa kune akafanana ... mutsauko chete wandinofunga ndiko kumhanya, kana iwe uchiziva zvauri kutsvaga iwe enda nekukurumidza zvakanyanya ...
Asi cherekedza matauriro andiri kuita ikozvino kubva ku Knoppix XD
Asi cherekedza manyorerwo andiri izvozvi kubva ku Knoppix XD
@Rana: Makorokoto pakuedza Linux, netariro vamwe Makadii ita saizvozvo.
Ini ndinobvunza mamwe maLinuxeros, ingava njodzi here kana linux isina koni ikaonekwa?
Emmmmm EE ... koni yacho yakafanana nemultitool inogona kuita zvese. Iwe unogona kuita kuwanda kwe gtk kunyorera ... kumisikidza ... kuumbiridza ... kurodha pasi ... telnet ... python ... asi izvo zvaizotangazve iro rehurongwa hwekushandisa (Zvimwe mikana yekukanganisa) uye zvodzora hurongwa mu kesi yekuvhura inopfuura imwe panguva (Nyaya yemhepo ine airoplay xD).
Ndinozviona seizvi, zviri nyore kudzidza kushandisa imwe, iyo zvakare inokubatsira iwe apo inoshamisa xserver ichatora mhepo nekuda kwekugadziriswa kwakashata) pane kugadzira zviwanikwa zvakawanda zvinongokuita mbeveve uye unonoke hurongwa.
Ini handizive, ndauya kuzoshandisa Shell messenger (iyo tmsnc = s) semuyedzo weizvo zvinogona kuitwa nemhedhiyo.
Uye ndinokuvimbisai kuti ini handina kumbobvira ndaenda kumberi, asi kana chirongwa chisiri muzvitoro, ndinofanira kuumbiridza, ikozvino tinotanga.
1. ./configure (Kazhinji hapana matambudziko)
2. gadzira (Kutsamira kunowanzodiwa ... Unovhura imwe chirongwa here kana kuti zvingave nyore kuzviita kubva mukati)
3. Sudo gadzira (Uye nenzira yaunomupa mvumo… ndinodzokorora mubvunzo… 1 chirongwa kana akati wandei?
Iyo inyaya yenyaradzo. Iyo koni haisi iyo shit ye ​​cmd iyo inoshandisa windows isingabatsiri, kubva pakoni iri muLinux unogona kuita ZVESE, ini handidi kuchinja reza raMcGuiver re "showy" bhokisi rezvishandiso ...
"Ndinobvunza maLinuxeros, ingave njodzi here kana linux isina koni ikaonekwa?"
Zvirinani doro risiri-doro!
Linux ine matambudziko ayo, uye kuti vamwe vashandisi havadi iyo console ndeimwe yacho, kunyangwe zvakaoma kwatiri isu linuxers kuti tizvibvume.
Mukuda kwenzvimbo yangu inodiwa yekushandisa ndinofanira kutaura kuti munguva pfupi yapfuura kufambira mberi kuri kunakidza, uye zvinogona kunyatsoonekwa kuti kufambira mberi kwese kuri kutendeuka kune zvido zvevashandisi. Kana paine "vasikana" uye "vakomana" distros, imhaka yekuti zvinhu izvi zvinotorwa mukufungwa. Kune avo vanofarira koni uye vanodzidza, vane ma distros anonyatso zadzisa iro basa. Kune avo vanongoda kushandisa iyo system vasinganetseke nezve mamwe ese, distros seUbuntu, mazuva ese ari kuswedera padhuze nehurongwa nezvakanaka zvese zveLinux, yakawedzerwa pakunakira kukuru kwekushandisa.
Ivan lasso akadaro
Ndanga ndichienda nekudzoka pakati pemasisitimu maviri munguva pfupi yapfuura. Kana ini ndikasasarudza kuenda zvachose pamusoro pazvo imhaka yezvirongwa zvakapusa (asi izvo zvandinoda) uye graphic palette inosimbirira kuti gehena ribve mandiri.
Kana iri koni, ini ndinobvuma kuti ini ndichiri kunzwisisa zvishoma uye kuti ndinokwanisa kuteedzera nekunamatira mirairo kana ndichinge ndave nechimwe chinhu. Zvakare, zviri kutonyanya kusagadzikana. Nekudaro, ini ndinonzwisisa kubatsira kwayo.
Kana ari mazwi ... Ini ndiri mudzidzisi, uye musatenda Esty, kuti vashandisiwo zvavo vanoona Windows yakaoma uye, chokwadika, iyo yetsamba.
Chinhu chakaomarara hachisi Windows kana GNU / Linux, asi kutama kubva kune imwe system kuenda kune imwe. Chinhu chakaomarara shanduko. Kudzidza hakubhadhare zvakanyanya sekugadzirisa kune chimwe chinhu chitsva.
Pindura kuna Iván Lasso
@Esty Ramba uchishandisa Windows, asi kana hutachiona hwakurova hauuye kuchema ku linux xD
Iwe unoshandisa Ubuntu asi ini ndoda kushandisa iyo koni zvakanyanya, shandisa Vim muoni yekoni, kunze kweizvozvo zvinoita kunge zvirinani kwandiri, zviri nani chaizvo sezvo ini ndichidzivirira kushandisa zviwanikwa pane kuita zvese zvandinoita mune iri koni ne graphic zvirongwa .
Iyo koni inotyisa kunyange ini ... uye ini ndinoshandisa makomputa kubva DOS ...
Ini ndinonzwisisa zvakanyanya vashandisi ve linux vanotaura kuti Linux haisi yemunhu wese uye blablabla… Asi haisi iyo pfungwa yekukwezva vashandisi kuti vasunungure software? Kana tikasiya chirevo ichi kumashure, tichava takasiya chikamu chehuzivi hwemahara software pachayo ...
Iko hakuna chikonzero chekuti «munhuwo mushandisi» kuti awane yakawanda ruzivo rwecomputer, nekuti -kwavo- iyo komputa haisi mugumo, asi nzira ...
Iyo koni haifanirwe kudikanwa nevazhinji kupfuura vashandisi vemberi ...
Pindura kune Ngirozi
Asi ndizvo zvatinofunga zvishoma:
Izvo zvakakosha here kuunza vashandisi kune linux pamutengo wekuparadza chinonzi linux chii?
Ino windowserize / idiotize (Izvo zvakafanana kune vakawanda) yakanaka kwazvo sisitimu yekushandisa kungounza vanhu?
Linux ndizvo zvazviri. Kufambira mberi kwakawanda kwakaitwa kubva pamazuva econsole uye koni chete. Kuti zvimwe zvinhu zvinyanye kuve mushandisi-fiendly, pamwe, kuti iyo koni inoshaikwa, futi.
Zvakare, tarisa pazviri seizvi ... Kubva riini chinhu chakaipa kudzidza zvinhu zvitsva?
Zvakanaka, heino sevha, ini ndinozvininipisa mumwe wevakuru veboka reUbuntu-Co.
Ini pachangu, iyo koni haifanirwe kumbobviswa, asi inofanira kuitwa zvishoma uye zvishoma kudikanwa .. Nguva yekupedzisira yandakashandisa iyo koni kuita rakajairika basa yaive… mmm, ini handizive .. makore maviri apfuura ?? Kusvikira ndawana maitiro ekuigadzira graphical? .
Zvimwe chete mumhuri yangu, hanzvadzi dzangu dzave kushandisa Ubuntu kwemwedzi misere, uye ini handizive kuti chii chinonyaradza icho. Ngatizvitarisei, tinofanira kupa rusununguko rwakazara, tingave tichida kudzidza kana kwete ...
Hanzvadzi dzangu dzinoita zvese izvo, zvinyorwa, mharidzo, chat, facebook, flash mitambo, nezvimwe, nezvimwewo .. Pasina kana kuraira tambo .. Usazvinetse nekutaura kuti linux ndeyevashoma, kupusa sei .. ndapota, linux Izvo ndeyevanhu vese, isu tiri pamusoro pekuparadzira.
Ahh, uye nezve nei Windows Xp mune chirevo ?? .. hapasisina, izvo zvinogona kumisikidza kuwedzera kweFirefox
Kana zviite ini ndobva ndaisa kuti ndiri muAmiga OS ine Amaya browser ... Ndiri muU. Chii chimwe chinokumbirwa ...
Kana imwe yemahara software yaitwa mune yepuraimari uye sekondari dzidzo, idzi hurukuro dzese dzinozochinja ... Ingori nyaya yenguva ...
Mhoro kune vese linuxers, izvozvi ndiri kuyedza linux uye zvinoita senge kwandiri kunyanya nekuti ndeye mahara uye nekuti ivo vanoti unogona kuzvishandura sezvaunoda.Ndinoda kuziva "Maitirwo azvo". …… …
Iyo iyo iyo vanoshandisa windows vanorasikirwa nayo kana ivo vachipambadza nguva yavo hehee zvese uye neconsole ichingo chiri chokwadi chekuti nayo munhu anogona kuwana zvivindi kubva kune w1ndows fasil uye censiyo chete nemirairo mishoma uye nzira yemotaje madhairekitori kungave kumba kana iwe uchida ipapo dhairekitori rine zita raunoda ne mkdir yap nemotaje raira j3j3j3 fasil uye kuverenga munhu anogona kuona izvo zvakachengetwa mumawndow kana iwe uchida kuziva zviri
Uye ini ndoda kudzidza zvakawanda nezve izvo, ini hapana chandinoziva nezve chero chinhu kana chimwe chakadai
Kwazisai kune avo vese vanosarudza iyo debian universal system
Chaizvoizvo munhu wese anotya kushandisa koni yeuyo anorasikirwa nayo, ivo ndevamwe vasingade chero chinhu chinopihwa zvese zvavanotenga kubva kune wndows kana achipa mari kuBilgwis guta ane husimbe
hapana chakaipa nazvo, kana vakairasa, zvirinani kuvhura chirongwa nekuti hachizive mashandisiro acho
kusvika aaa Uye zvinowedzera kana vasingade kushandisa linux kana kuti ndiani anozvinzwisisa kana vazhinji vandikumbira rubatsiro kuti ndibvise sei hutachiona hwakanaka hwewndows uye zvakanaka fasil kubva kumudzi wekunyaradza ijiji zvakanaka relas zvakanaka mavhairasi kwandiri kugadzirisa chimwe chinhu asi haina kunaka ini ndakangouya ne linux ndokuisa ma virus akaipa mumarara kana mavhairasi asina kusimba futi
ay saka ndinoramba ndichiti ndiri hafu yekuda kukwana komputa
zvakanaka kune vese kuti ndione ndinofunga se newbie chaiyo yandinenge ndiri mune iyi ye linux iyo linux inofanirwa kuchinjika kumushandisi, ndingafarire kuziva mashandisiro e linux zvakanaka asi iyo koni inocheka zvakanyanya.I yangu kitaria windows asi sei Ini ndinoishandisa kumitambo kwete ini yandinogona, kunze kwezvauri kutsvaga ndezvekuti linux inowedzera uye iine zvinhu zvidiki senge zvandave ndataura, hauzvitore uye ndinozvibatanidza ini. Ndingafarire kushandisa koni asi zvinonetsa kuwana mumwe munhu anokutsanangudza kubva ku0 mhedzisiro yekuishandisa
Pindura kune albero
Muchinyorwa mune maviri maurairidzi ekudzidza mashandisiro ekushandisa koni kubva pakutanga, kwaziso :)
Ndanga ndakavatarisa, nemoyo wese kuti ndinenge ndakanganisa pachokwadi, iwo maodha avanowisa kuti vaone dhairekitori uye nezvimwe kana izvo zvemukati mefaira zvinokurumidza kwandiri kuti ndizviite negonzo richienda kufolda vhura Ndine urombo nekusaziva kwangu Nezve linux, chandiri kuda kuziva mashandisiro acho zvakanaka.
LINUX HAISI IYO YAKANETSA, KWANGU ZVINONYANYA .. UYE CHETE KUTI UNE MWOYO MWOYO NEKUCHENJERA KUTI UNOGONESE KUZVIBATA .. LINUX HAISI YEMWE WESE ..
Ini ndoda kuziva kuti chii chinonzi console uye chii chainoshandiswa
ndokumbira undiudze esk ibasa ramangwana Chishanu 17/06/11 ndapota hupenyu kana kufa
Sezvo iwe ungave wakaverenga mune iyo posvo: «MuLinux iwe unowana" dema fafitera "iro iro vashandisi veLinux vanofanirwa nguva nenguva kuitisa kwariri, kuisa zvinhu, kufambisa mafaera, kushandura mvumo yefaira, kumisikidza zvimwe zvinhu zvechirongwa. zvinoenderana nedistro senge internet kubatana kana vhidhiyo kadhi madhiraivha. »
Mune mamwe mazwi, iyo "dema hwindo" ndiwo murairo (kuraira) muturikiri. Iyo inoshandiswa kutaurirana neiyo inoshanda sisitimu, iyo iwe yaunotaurira kuburikidza nemitsara yezvinyorwa (raira mitsara, mirairo) mashandiro aunoda kuita.
Iwe unogona zvakare kuita aya mashandiro mune graphical mode, uchishandisa mabhatani uye skrini, asi uchishandisa rairo koni, iwe unoita zvese kuburikidza nemitsara yezvinyorwa.
Mhoro vanhu, zvakanaka ini ndiri kuyedza kunzwisisa chaizvo kuti ndeyei, haina kunyanya kuomarara asi zvakanaka ini ndoda kugadzira handoooo, kwaziso
antonio felpeto uceira akadaro
Kugona. Pfungwa yangu yekuzvininipisa ndeyekuti yemahara software inochinjika, zvinoreva kuti Linux distros inogona kugadzirwa pamwe kana isina koni, padhuze nemushandisi kana kwete ...
Mukupfupisa, ndinofunga pachave nema distros anotarisa pane yakajeka giraidhi uye padanho revashandisi (senge Ubuntu semuenzaniso) uye pachave nevaya vasina.
Linux ndeye kana kwete yemunhu wese?
Zvakanaka, munhu wese asati ashandisa nyaradzo, uye hapana akafa nekuda kweizvozvo ... zvinoitika ndezvekuti windows vanopa zvese zvakatsengwa uye, «sei ndichivhura iro diki dema uye risinganzwisisike hwindo, ndichikwanisa kubaya apa, uye pano? ! kana bhatani iri richijekesa kwazvo! Gadza! "
Akanyoreswa linux mushandisi 532418
Akanyoreswa ubuntu mushandisi 33388
Pindura kuna antonio felpeto uceira
Ini pachangu ndinonzwa kuti ruvengo kuWindows (Microsoft) rwakawandisa, iwo maRadical Linuxeros nevamwe vasiri (sevakawanda mumaforamu) vanhu vasingashiviriri vanoda kudzinga hafu yepasi sedhivi rekusashandisa zvaunoshandisa.
«Kana ndikashandisa Ford Mustang uye ndikakuudza kuti iri nani pane yako Grand Marquiz 93, uye ndinokuudza kuti injini yeMu Mustang iri nani, inomhanya nekukurumidza, hausi kuzo chinja mota yako kuti ive Ford Mustang kana Grand Marquiz yako ichishanda uye inokushandira.
"Chii chinoshandisika kuchinja kana izvo zvauinazvo zvichitoshanda nemazvo"?
Zvino, haasi munhu wese anoda kudzidza chero chinhu nezveLinux zvachose, kunze kwekubva kunyaradzo.
MS Windows pamwe neMAC (apple) vauya kuzo "sunga vatengi vavo"
Nekuti semakambani ivo vanoziva kuti sekufambira mberi kwetekinoroji inofanira kuve nyore.Windows neMAC zviri nyore kwazvo, kuti kana watoshandisa Windows kana Mac usati waziva mashandisiro acho matsva.
Ini ndinoshandisa Windows, uye Linux futi, asi haisi yekuzvidza kambani, vanhu vanoisarudza kuti ive nyore kushandisa, nzwisisika uye hushamwari.
Dambudziko chairo reLinux nderekuti iri sisitimu isina kusimba, unogona kuiputsa uye nekushaiwa rubatsiro painternet yese, mhinduro yacho ingave yekubheja kana fomati ..
Iyo Software, kunyangwe yeLinux kune yakanaka yemahara software (yakakomba) senge Blender, Libreoffice (damn Java, iwe uri nyanzvi yekumedza (flash)) Gimp (yakaipa sei kuisirwa munzvimbo), Dia, tsime, haina Serious software.
Zvinofungidzirwa kuti muUbuntu mune zvinopfuura makumi matatu neshanu software mapakeji (asi iwo ari makumi matatu neshanu mapakeji esoftware kana vari kuverengawo maraibhurari ese, uye zvinhu ...? Zvakanyanya BETA software ..
Nzira yekuvimba CD rekodhi iyo ine vhezheni 0.0.75? Neraki pane pburn kana Brasero.
Linux iri kuzokura zvishoma nezvishoma, ndinoreva Linux nekuda kweKernel (kernel) uyo anonyatso kukanganisa purofiti yeLinux "makambani" akaita seCanonical uye maDistros avo anobuda mwedzi mitanhatu yega. (NDIANI ASINGAGONESE DZIMWE DZIMBA "KUTUSURA KUSunungura"?